Izindaba - Ezinye izindaba ezibalulekile mayelana nesitifiketi se-GRS
I-Global Recycle Standard (GRS) iyindinganiso yamazwe ngamazwe, yokuzithandela, nephelele yomkhiqizo ebeka izimfuneko zabakhiqizi bezinkampani zangaphandle ukuze baqinisekiswe, njengokwenza kabusha okuqukethwe, uchungechunge lokugcinwa, imikhuba yezenhlalo nezemvelo, kanye nemikhawulo yamakhemikhali.Umgomo we-GRS uwukukhuphula ukusetshenziswa kwezinto ezigaywe kabusha emikhiqizweni kanye nokunciphisa/ukuqeda izingozi ezizibangelayo.
Imigomo ye-GRS yilezi:
1, Chaza amazinga kuzo zonke izinhlelo zokusebenza eziningi.
2, Landelela futhi ulandelele izinto ezigaywe kabusha.
3, Nikeza abathengi (imikhiqizo nabathengi bokugcina) ngamathuluzi okwenza izinqumo ezinolwazi.
4, Yehlisa imiphumela eyingozi yokukhiqiza kubantu nasemvelweni.
5, Qinisekisa ukuthi izinto ezitholakala emkhiqizweni wokugcina zigaywa kabusha futhi ziyaqhubeka.
6, Thuthukisa ukuqamba okusha futhi uxazulule izinkinga zekhwalithi zokusebenzisa izinto ezigaywe kabusha.
Amabhizinisi (izimboni) angathola izinzuzo eziningi ezingalindelekile ngemva kokuphasa isitifiketi:
1. Thuthukisa ukuncintisana kwemakethe kwenkampani “nokuvikela imvelo” kanye “nokuvikela imvelo”.
2. Iba nelebula evamile yokugaywa kabusha kwezinto.
3. Qinisa ukuqwashisa ngemikhiqizo yenkampani.
4. Ingabonakala emhlabeni wonke, okwenza kube lula ukungena enkundleni yamazwe ngamazwe.
5. Izinkampani zinethuba lokufakwa ohlwini lokuthengwa kwabathengi bamazwe ngamazwe nezinkampani ezidume umhlaba wonke.
Ilogo ye-GRS akulula ukuyithola.Ukufaka isicelo sesitifiketi se-GRS, inkampani (imboni) kufanele ihlangabezane nezimfuneko ezinhlanu ezinkulu zokuvikelwa kwemvelo, ukulandeleka, izimpawu zokugaywa kabusha, isibopho somphakathi kanye nemigomo evamile.
Inkampani yethu- i-Fuzhou Huasheng Textile ithole isitifiketi se-GRS ukuze inikeze amakhasimende ethu izindwangu zemvelo ezisezingeni eliphezulu.Nganoma imuphi umbuzo kanye nemibuzo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Isikhathi sokuthumela: Jan-11-2022